Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) inethuba elitsha lesitayile sase-Afrika kunye ne-Saudi Arabia ekhokelayo nendawo ye-Morocco
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba zikaRhulumente » Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) inethuba elitsha lesitayile sase-Afrika kunye ne-Saudi Arabia ekhokelayo nendawo ye-Morocco
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Iindaba zikaRhulumente • Icandelo lokungenisa izihambi • Utyalo mali • iintlanganiso • Iindaba eziNqabileyo eMorocco • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • ISpain Iindaba Eziphambili • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • I-WTN
IMorocco yimbiza yokunyibilika yamadynasties kunye neenkcubeko. Yenza isixeko esifanelekileyo ukuguqula ukhenketho lwehlabathi kunye nomzi mveliso wokhenketho oluye lwanyanzelwa ukuba luguqe.
IMorocco isenokuba lilizwe elinakho ukulungisa okungalunganga kunyulo luka-UNWTO luka-Nobhala-Jikelele kwaye libeke ikamva lale-arhente inxulumene ne-UN emva komgaqo ngenkxaso yemali eyimfuneko.
IMorocco isenokuba yindawo apho ukhenketho luphinde lube yinkokeli kuqoqosho lwehlabathi kunye nosapho lwehlabathi.
Eyona mfihlelo, kodwa eyona ibaluleke kakhulu, kukuhlanganisa jikelele Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) yasuswa ngokuzolileyo ukusuka ngo-Okthobha u-2021 ukuba ibanjwe ngoku ukusuka nge-30 ka-Novemba ukuya nge-2 ka-Disemba 2021, eMarrakesh, eMorocco.
Ukuqeshwa kwakhona kukaZurab Pololikashvili njengoNobhala Jikelele we-UNWTO kwixesha elizayo ukusukela ngo-2022-2025 kuya kuvotelwa. Kukho ithuba lokulungisa into ebalulekileyo engalunganga.
Ukuhambisa ikomkhulu le-UNWTO ukusuka eMadrid, eSpain, ukuya eRiyad, eSaudi Arabia, kulindeleke ukuba kongezwe kwi-ajenda kwaye kugqitywe ngayo.
INdibano yeZizwe eziManyeneyo ye-UNWTO 2021, Marrakesh, Morocco
Ngaphandle kokukhupha nasiphi na isindululo okanye iindaba, amalungu oMbutho wezoKhenketho weHlabathi azisiwe namhlanje malunga notshintsho lomhla olulindelekileyo kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo yama-24.
I-GA izakubanjwa njengoko bekucwangcisiwe kwasekuqaleni kwiSixeko saseMoroccon eMarrakesh ukusukela nge-30 kaNovemba ukuya nge-2 kaDisemba ngo-2021. Utshintsho lomhla bekulindelwe kwaye yayiyimfihlo evulekileyo, esandula ukutyhilwa.
IMorocco yeyona ndawo iphambili yokuhamba kunye nezokhenketho eAfrika, kunye nexhoba le-COVID-19, njengoninzi lwehlabathi.
I-UNWTO iye yagxekwa ukuba ayisebenzi kwaye ayiphili kwimiceli mngeni ejongene nayo kwezokhenketho okoko i-COVID-19 yavela ngo-Matshi ka-2020.
IMorocco ayizukuba yindawo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo kuphela. Ayizukubanjwa kwilizwe elizinikeleyo kushishino lokhenketho, kodwa nakwilizwe eliqhuba lo msitho ubalulekileyo ngokuchasene neengxaki xa i-COVID-19 ikwinqanaba elilindelekileyo.
Iya kuba ngumnyhadala apho amazwe angamalungu anokulungisa khona okungalunganga okuqale ngo-2018. Ikwangumsitho apho ikhaya le-UNWTO linokuhanjiswa khona okokuqala okoko kwenziwa i-arhente ekhethekileyo ye-UNWTO.
Kuxhomekeke kuyo yonke le nto, i-UNWTO inokuthi okokuqala ibe ngumbutho onemali eyaneleyo, inkxaso, kwaye ibuyiselwe njengenkokeli kwihlabathi kunye nomdlali weqela kwicandelo lokhenketho loluntu.
Ukufumana ukuba semthethweni kwakhona, umba wezinto zokuvota ngo-2017 kwaye kwakhona ngo-2021 inokugqitywa ekugqibeleni ngaphambi kokuqinisekisa unobhala-jikelele kwixesha le-2022-2025.
IMorocco iyakuba yindawo ekuphela kwayo apho uNobhala-Jikelele wangoku engenakuba sisityholo kunye nejaji kwangaxeshanye.
I-Saudi Arabia ibiphila de ibe ngumphenduli wokuqala kunye nokunye okuninzi kushishino lokuhamba kunye nokhenketho lwehlabathi. Ngeebhiliyoni ezilungele ukutyala imali, esi sisiphakamiso esinomtsalane kumbutho onohlahlo-lwabiwo mali oluzizigidi ezisi-8, uninzi lwalo oluchithwe kuhambo lukaNobhala-Jikelele kunye nabahlobo bakhe. ISaudi Arabia xa ibuyayo ivakalelwa kukuba ikomkhulu elitsha eRiyadh liya kukhusela uzinzo kwezemali kule arhente inxulumene ne-UN. Ke ngoko, isindululo sokuhambisa ikomkhulu lisuka eMadrid liye eRiyadh kulindeleke ukuba longezwe kwi-ajenda.
Okwangoku, le ajenda ayichazi konke okwangoku. Ngoku kufikelela kumalungu e-UNWTO ukugqiba i-ajenda ngexesha elifanelekileyo. Kuxhomekeke kumalungu ukuba enze amalungiselelo ohambo eMarrakesh, ke ivoti ebanzi kwimicimbi yokhenketho kwihlabathi liphela inokuqhutywa kwaye iqinisekiswe.
Sinokulindela ukuba iinkokeli, nakwicandelo lezempilo lehlabathi, kumzi mveliso wabucala, kwiintloko zemibutho, nakuluhlu olubanzi lweendaba, ziya kumenywa ukuba ziye kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo. Ukhenketho lwehlabathi lufuna ubunkokheli, kwaye iMorocco inethuba, elinokuba lithuba lokugqibela, lokusindisa uMbutho wezoKhenketho weHlabathi
I-ajenda yangoku ngunobhala we-UNWTO :.
NgoMvulo, Novemba 29, 2021
NgoLwesibini, Novemba 30, 2021
10:00 - 11:00 IKomiti yeNkqubo kunye neBhajethi
I-10: 00-11: 00 Ikomiti yokuHlolwa kwakhona kwezicelo zaMalungu aManyeneyo
11:30 - 13:00 Iseshoni ye-114 yeBhunga eliLawulayo
I-12: 00 - 14: 00 ye-43 ye-UNWTO yamaLungu aManyeneyo eSeshini
14:00 - 15:00 Isidlo sasemini
15:00 - 16:30 IKomiti yezoKhenketho noZinzo
15:00 - 16:30 IKomiti yezoKhenketho noKhuphiswano
15:00 - 17:00 Iqela elisebenzayo kwiKhowudi yeHlabathi yokuKhuselwa kwabakhenkethi
I-15: 00 - 18: 00 ye-43 ye-UNWTO yamaLungu aManyeneyo eSeshini
16:30 - 18:00 IKomiti yezoBalo
16:30 - 18:00 IKomiti yezoKhenketho kwiMfundo ye-Intanethi
19:00 - 22:00 Wamkelekile isidlo sangokuhlwa
NgoLwesithathu, uDisemba 1, 2021
10:00 - 10:30 Ukuvulwa ngokusesikweni
10:45 - 13:15 Iseshoni yamalungu amaninzi 1
13:15 - 13:30 Ifoto yeqela
13:30 - 15:30 Isidlo sasemini
15:00 - 15:30 IKomiti yeCredentials
15:30 - 18:30 Iseshoni yamalungu amaninzi 2
20:30 - 22:30 Isidlo sangokuhlwa
Lwesine, Disemba 2, 2021
I-10: 00 - 13: 00 Iseshoni yemixholo: Ubuchule, iMfundo noPhuhliso lwamaPhandle ukwakha uMva ngcono
13:00 - 14:30 Isidlo sasemini
14:30 - 17:30 Iseshoni yamalungu amaninzi 3
14:30 - 16:30 Amalungu eBhodi aManyeneyo
17:30 - 18:30 Intlanganiso yamaLungu
20:00 - 22:00 Isidlo sangokuhlwa
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 3, 2021
10:30 - 12:00 Iseshoni ye-115 yeBhunga eliLawulayo
12:00 - 12:30 IKomiti yeNkqubo kunye neBhajethi
Ukutyelelwa kwezobuchwephesha (TBC)
Cofa apha ngolwazi oluthe kratya kwi-24 ye-UNWTO General Assembly.